Nlekọta 1e Degree Industry - GO! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ (Ụdị oge // B-Nzuzo // CAMPUS RUGGEVELD)
1 ogo ụlọ ọrụ
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > Ngalaba ogo 1e > Ngalaba ogo 1e
Ọzụzụ Ọmụmụ Ihe + (B-iyi) nke Gaa! Ụlọ akwụkwọ sayensị, campus Ruggeveld
Na 1e degree B-stream Industry Ị nwere ike ịtọ ụdị ọzụzụ dị iche iche dịka igwe, ígwè, ọkụ eletrik, osisi, wdg. Nke a ga-eme ka ịhọrọ ọmụmụ ihe nke ọma maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nhazi 2.
Na Afọ 1e ị nweta nnukwu akụkụ nke akwụkwọ agụmakwụkwọ niile bụ otu maka onye ọ bụla. Tụkwasị na nke a, ị ga-amụtakwu banyere nkà na ụzụ. Na Afọ 2e Ị nwere ike ịmụta site na ọzụzụ dị iche iche dịka igwe, ígwè, ọkụ eletrik, osisi, wdg. Ị na-amụta faịlụ, ịkpụ, ịkụgharị, n'ogige, hụ, ... Ị mụta iji tụọ, akara ma họrọ ma jiri ngwaọrụ ndị kwesịrị ekwesị. Ọzọkwa, ị na-amụta (de) ihe nkedo na fuses na bọtịnụ dị mfe. Ị mụtara ịghọta ihe osise eletrik dị mfe na ịghọta atụmatụ. Ị na-amụta iji weghachite nrụnye eletrik dị mfe n'ụzọ dị nchebe.
Ịchọrọ ịrụ ọrụ n'aka gị
Ịchọrọ ịrụ ọrụ na ngwaọrụ
Ịchọrọ ịghọ ọkachamara
Ọ na-amasị gị ịrụ ọrụ n'aka gị? Na ịhụnanya maka ọrụ gị? Ị nwere njiri aka na ntanetị nyocha?
Inwe ike ma dị njikere iji aka gị rụọ ọrụ dị mkpa, n'ihi na ị na-amụta mgbe ị na-eme ya, kama ịnweta akwụkwọ. Ndị na-eto eto ndị na-anataghị akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ gọọmentị ka nwere ike mezuo nke a ma ọ bụrụ na ha gafere 1e afọ B-stream.
Ị gafeela afọ 2e? Mgbe ahụ i nwere ike ịmalite na BSO 2e degree. Ịgagharị na 1A nwekwara ike. Nke a bụ 1e nke ọganihu mmepụta ihe bụ ọzụzụ kachasị mma maka ịgbaso ọmụmụ ihe: Eletrik, Auto arụzi, Ngwongwo Mechanical Mechanics & osisi
Gaa ebe a na tebụl nke 1e degree B-stream Industry:
Afọ 1e nke na-erughị ala (35KB, .pdf)
Afọ 2e nke na-erughị ala (37KB, .pdf)